Iphrojekthi yase-Azerbaijan ifaka isithombe esenziwe ngethusi sikaMongameli kanye noMfazi kaMongameli.
Iphrojekthi Kahulumeni waseSaudi Arabia
Iphrojekthi kaHulumeni waseSaudi Arabia inezithombe ezimbili zethusi, okuyizikwele ezinkulu i-rilievo (amamitha angama-50 ubude) namaSand Dunes (amamitha angama-20 ubude). Manje sebemi eRiyadh futhi baveza isithunzi sikahulumeni nezingqondo ezihlanganayo zabantu baseSaudi.
Sithumele uchungechunge olulodwa lwezithombe zethusi e-United Kingdom ngo-2008, ezazenzelwe ukuzungeza okuqukethwe ngamahhashi abophayo, ukuncibilikisa, ukuthenga impahla nokufaka amahhashi esihlalo sasebukhosini. Le phrojekthi yafakwa eBrithani Square futhi isakhombisa ubuhle bayo emhlabeni njengamanje. Wha ...
Sakha isethi eyodwa yezithombe zethusi zaseKazakhstan ngo-2008, kufaka phakathi izingcezu eziyisithupha ze-6m-high General On Horseback, ucezu olulodwa lwe-4m-high i-Emperor, ucezu olu-1 lwe-6m-high Giant Eagle, ucezu olulodwa lwe-5m-high Logo, 4 izingcezu zeHhashi eliphakeme elingu-4m, izingcezu ezi-4 zezinyamazane ezinde ezi-5m, nocezu olu-1 lwe-Relievo expre olungu-30m ...